DOWNLOAD ASTRA MEPEE MBIPUTE KACHASỊ ỌHỤRỤ - MMEMME NYOCHA - 2019
N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na mmemme "Astra Cutting". Ọrụ kachasị ya bụ iji mee ka ibelata ihe ọkụkụ na-ebugharị. Akụrụngwa na-enye ihe niile ịkwesịrị ịmepụta kaadị sụgharịrị, akụkọ edemede na akwụkwọ aha. Astra Raskroi dị mma maka ndị ọkachamara na ndị amateurs n'ihi nchịkwa dị mfe ya na ọnụnọ nke ọtụtụ ọrụ. Ka anyị lebakwuo ya anya.
Eji ihe pụrụ iche mebie ihe. Site na ndabara, a na-echekwa ọtụtụ blanks, n'etiti ha bụ tebụl na otu ụlọ nchebe. Iji mepụta ihe pụrụ iche, ịkwesịrị ịhọrọ ngwaahịa dị mfe. Ịmụbawanye akwụkwọ ọgụgụ nke ndebiri dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị mmepe, ma a na-enwekwa ọrụ mbubata site na mmemme ndị ọzọ.
Na-edezi nkọwa ngwaahịa
Iji mee mkputu ị chọrọ ịkọwa nkọwa nke ngwaahịa ahụ. A na-eme nke a na tebụl a kapịrị ọnụ. Enwere otutu akụkụ na ndebiri, ma onye ọrụ nwere ike idezi ma ọ bụ hichapụ ha n'oge ọ bụla. Jiri nlezianya tinye data na akara, ọ dabere na ụdị ịcha.
Na-agbakwụnye nkọwa nke gị na-eme na nhọrọ pụrụ iche. Na ọtụtụ taabụ dị n'ụdị ụfọdụ iji mejupụta. Mbụ, tinye ozi n'ozuzu, ihe onwunwe, ogologo, obosara na ọnụọgụ. A na-edozi ihu n'akụkụ mpaghara taabụ. Na mgbakwunye na nkọwa, ị nwere ike itinye faịlụ ọ bụla ga-akọwa ya ma ọ bụ rụọ ọrụ ụfọdụ.
Na taabụ abụọ nke windo ahụ, a na-emepụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ntanetị, ebe ị ga-egbu. Kọwaa ihe, obosara, elu, ọkpụrụkpụ, ogologo na ibu nke mpempe akwụkwọ ahụ. Mgbe ị banyere ozi ahụ, a na-agbakwunye ya na tebụl. Na-akwado ọnụọgụ akwụkwọ ọtụtụ na-akparaghị ókè.
Edere osisi ịkụ
Ihe ikpeazụ ma otu nzọụkwụ bụ eserese. A na-eme ya na akpaghị aka dịka ozi ahụ esinyere, ma onye ọrụ nwere ike idezi data ọ chọrọ na taabụ map.
A na-ewu obere nchịkọta akụkọ na "Astra Cutting", ebe akwụkwọ ahụ ahọpụtara ga-emepe. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ nke ị nwere ike ịmegharị akụkụ n'akụkụ ụgbọelu ahụ. Ya mere, atụmatụ a na-enyere aka iji aka ya kpochapụ ya. Mgbe mgbanwe ndị ahụ ga-echekwa ha ma zipụ ọrụ ahụ iji bipụta.
Maka mmejuputa nke oke osisi choro ihe di iche iche, ihe ndi ozo, na ugwo ego. Iji gosipụta ego dị mkpa maka ihe na ego maka ọrụ a, jiri naanị taabụ "Akụkọ". N'ebe ahụ ị ga-ahụ ụdị akwụkwọ dịgasị iche, gụnyere akụkọ, okwu na map ndị ọzọ.
Lezienụ anya maka nhọrọ maka ịkecha na ibipụta, nke dị na ntọala ihe omume ahụ. N'ebe a, ị nwere ike ịtọ otu parameters ndị dị mkpa otu ugboro, ka e jiri ha rụọ ọrụ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọtụtụ nhọrọ maka mmezi anya.
Oge ikpeghị ikpe;
Nkwado akwụkwọ ụlọ ahịa;
Ọrụ arụ ọrụ;
Nhọrọ ole na ole na nchịkọta akụkọ.
"Astra Raskroi" dị mfe, mana n'otu oge ahụ, usoro mmemme, nke a na-ahazi maka ijiji osisi na ihe a kpụziri. Ọ na-enye gị ohere igbalite usoro a, nyere gị aka ịhazi data ma nweta akụkọ gbasara ihe na ụgwọ.
Download usoro ikpe nke Astra Reveal
Software maka igbutu chipboard Mmemme maka iwe ihe eji ebipu Astra S-Nesting Astra Designer Furniture
Astra Cutting bụ usoro dị mfe ma dị irè maka njikarịcha nke ịkụcha akwụkwọ. Ọ na-enye gị ohere ịme ngwa ngwa site na ịcha ma ọ bụ jiri ndebiri arụnyere.
Onye Mmepụta: Ụlọ ọrụ Technos
Akwụ ụgwọ: $ 4